Shiinaha 8MM, 12MM, 16MM, 24MM, 32MM, 44MM iyo 56MM SIPLACE Qudiyaha Wacan ee Soo Saaraha iyo Soo-saareha |Xinling
8MM, 12MM, 16MM, 24MM, 32MM, 44MM iyo 56MM SIPLACE Qudiyaha smart X Splice Sensor
Qaabka Alaabta:8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM 56MM
Nooca cusub ee Siplace TX oo wata ilaa 22um@3sigma.Waa sax in lagu shaqeeyo saxsanaanta ugu sareysa oo lagu dhejiyo kala dheereynta cufan ee 0201 (mm) qaybaha xawaaraha ugu sarreeya, isku dhafka cusub ee saxnaanta sare iyo Xawaaraha Sare wuxuu xiriir muhiim ah la leeyahay quudiyaha.
SIPLACE (TX) waxa uu dhererkiisu yahay 1m oo kaliya waxana uu qaadi karaa 80 feederayaal x 8mm iyo 103,800 CPH xawli xad dhaaf ah, kaas oo ah wax soo saar aan la barbar dhigi karin.
SIPLACE (X) quudiye garaadka leh oo wata tignoolajiyada wax soo saarka ee Jarmalka ee quruxda badan iyo software horumarsan ayaa ka dhigaysa mid ka xor ah jaangooynta nolosha.
Ma jiro naqshad burush kaarboon ah oo xamuulka ah oo si weyn u dheereya nolosha adeeg bixiyaha iyo rareeyaha.Waxaa intaa dheer, waxay si toos ah u soo dejisan kartaa barnaamijka wax soo saarka oo si toos ah u dhigma barnaamijka si loo dejiyo cabbirrada quudinta.
Qudeeyaha SIPLACE (X) waxa uu leeyahay quwadda kaliya ee aan lala xiriirin ee adduunka iyo gudbinta xogta.Quudinta waa lagu dari karaa oo laga saari karaa (kumbuyuutar iyo ciyaar) inta mashiinku socdo, waxaana lagu qalabayn karaa dareenka.
Ka faa'iidayso habka wax soo saarka horumarsan iyo tignoolajiyada SIPLACE (X) qaybaha quudiyaha garaadka una ogolow qaybaha mishiinada taxanaha SIPLACE inay si fiican u nuugaan, si fiican u fuulaan.
SMT Feeder, oo sidoo kale loo yaqaan SMT Quudinta Gun, Qayb Quudiye, ama Qayb Quudiye, waa iyo aalad koronto si ay u xirto cajalad-iyo gariirada qaybaha SMD, ka fuji daboolka (filimka) daboolka sare ee qaybaha, oo quudiya qaybaha aan la daboolin habka gudbinta sprocket) isla booska soo qaadis go'an oo lagu soo qaadayo mashiinka-qaadista.
Quudiye SMT waa qaybta ugu muhiimsan ee mashiinka SMT, iyo sidoo kale qayb muhiim ah oo ka mid ah kulanka SMT ee saameeya awoodaha isku-dhafka PCB iyo waxtarka wax soo saarka.
Qaybaha badankooda waxaa lagu bixiyaa warqad ama cajalad caag ah, oo ku jira cajalado cajalado ah oo lagu raro feederiyeyaasha ku rakiban mishiinka.Wareegyo isku dhafan oo waaweyn. (Ics) ayaa mararka qaarkood ah
Waxaa lagu hayaa saxaarad ku urursan qayb.Inta badan Ics ayaa lagu bixin doonaa cajalado halkii laga heli lahaa saxaarad ama ulo, Horumarinta tignoolajiyada quudiyaha waxay la macno tahay in qaabka cajaladu uu noqonayo habka la doorbido ee lagu soo bandhigo qaybaha mashiinka SMT.
Hore: Saxnaanta sare ee Xinling Single-Track Online AOI XLIN-VL-AOI66 ee kormeerka PCBA
Xiga: Asalka cusub ee ASM SMT SIPLACE TX guddiga kontoroolka moduleka ee mashiinka meelaynta ASM
Saxnaanta sare ee Xinling Single-Track Online AOI...
Dual-Track Online XLIN-VL-AOI68 AOI mishiinka loogu talagalay...
Saxnaanta sare ee Xinling offline/desktop AOI XLIN...